मिस्टर आरजे : बैदेशिक रोजगारीमा ठक्कर खाएपछि र्‍यापको स्वाद फेर्ने ठिटो !
मिस्टर आर जेको इन्ट्री भएसी डान्स फ्लोर सब खाली छोड्देउ नाच्नेहरु सँगै नाचौँ ननाच्नेले ताली ठोक्देउ आफ्नै मनको मालिक म दुनियाँको किन सुनुँ डीजे यही म्यूजिक बजा, जबसम्म म चेञ्ज नभनुँ । काठमाडौं। सफल भएरमात्रै जीवनका असफलतासँग बदला लिन सकिन्छ।…
पल शाह : रहरले होइन, अवसरले हिरो
काठमाडौं। चाहेका कुराहरु पुगेको भए पल शाह के बन्थे होला? ‘सायद ट्याक्सी ड्राइभर’– यो जवाफ उनकै हो। आजभन्दा १५ वर्ष अगाडिको कुरा। विरानो सहर काठमाडौंमा पलको चिनेजानेका व्यक्ति विरलै थिए। शुरुमा आउँनासाथ आफन्तकोमा बसे। जागिरको खोजीमा लागे। तर, जागिर पाएनन्। बस्न–खान…
संसदका हाइलाइटः हाइ काढेका सांसदलाई सभामुखको व्यंग्य– थाक्नु भो बस्नुस् ! (भिडियो)
काठमाडौं। आजको संसदमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी दल राजपाले सँगै मिलेर बैठक अवरोध गरेका छन्। करिव एक घण्टासम्म संसदमा अवरोध र नाराबाजी चल्यो। त्यो बीचमा सत्ता पक्षका सांसदहरू उठेर प्रतिरोध पनि गरे। सभामुखले प्रतिपक्षीलाई गलाउनका लागि…
महिलाले पुरुषमाथि जबरजस्ती गर्नु बलात्कार हो?
केट सिल्वर बीबीसी न्यूज बीबीसी । जब एक पुरुष कुनै महिलासँग बिना इच्छा जबरजस्ती यौन सम्बन्ध बनाउँछ भने त्यो बलात्कार हुन्छ, तर यदि एक महिलाले पुरुषलाई बिना उसको इच्छा यस्तो गर्न बाध्य बनाउँछे भने के बलात्कार होइन? इंग्ल्याण्ड र वेल्सको…
घट्दै तीज गीत, सुध्रिँदै अवस्था !
काठमाडौंं । तीजका गीत घन्किन थालिसकेका छन्। रेडियो, टेलिभिजनदेखि यूट्युब र अन्य सामाजिक सञ्जालमा तीजका गीतले स्थान जमाउँदै छन्। लोकदोहोरी क्षेत्रका गायक–गायिका, मोडलदेखि भिडियो निर्देशक, छायांकार, भिडियो सम्पादकसम्म तीजका गीतमा ब्यस्त छन्। धेरैले तीजका गीत सार्वजनिक गरिसकेका छन्। कोही सार्वजनिक गर्ने…
बीबीसी। गोपनीयतासम्बन्धी चासोहरूको व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन्। अमेरिकाको संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी)का अनुसार फेसबुकले ५ अर्ब डलर जरिवाना तिर्नेछ। फेसबुकले गोपनीयता हेर्ने एउटा स्वतन्त्र समिति पनि बनाउनु पर्नेछ। उक्त समितिमा…
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प पाकिस्तानप्रति उदार भएका हुन्?
बीबीसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको अमेरिकाको भ्रमणका क्रममा आफू कश्मिर मुद्दामा मध्यस्थता गर्न तयार रहेको बताए। ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही समय अगाडिको भेटका क्रममा आफूलाई कश्मिर मुद्दामा मध्यस्थता गर्न आग्रह गरेको दाबीसमेत गरे। योसँगै ट्रम्पले…
रुस–चीनले गरे संयुक्त सैन्य अभ्यास, कोरिया–जापानले दिए जवाफ
बीबीसी। रुसले पहिलो पटक चीनसँग मिलेर संयुक्त रुपमा हवाइ गस्ती अभ्यास गरेको जनाएको छ। त्यसको जवाफमा दक्षिण कोरिया र जापानले पनि आफ्ना लडाकु विमान आकाशमा उडाएका थिए। रुसका रक्षा मन्त्रालयका अनुसार चार बम वर्षक विमानले लडाकु विमानको सहयोगमा जापान सागर…
काठमाडौँ । हाम्रा कुनै नेता, बुद्धिजीवी वा पत्रकारलाई भारतीय दलाल वा रअको एजेन्ट भन्यो भने उसका लागि त्यो भन्दा ठूलो अर्को कुनै गाली हुँदैन। रअ, अर्थात भारतीय गुप्तचर संस्था, जसको पूरा नाम हो- रिसर्च एण्ड एनालाइसिस बिङ। हरेकजसो मुलुकमा आफ्नो…
पाकिस्तानकै सूचनाका आधारमा बिन लादेन मारिएकाे इमरान खानकाे खुलासा
वासिङ्टन। अमेरिका भ्रमणमा रहेका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले आतंकवादी संगठन अल–कायदाका प्रमुख ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानमा रहेबसेको ठाउँका बारेमा पाकिस्तानी गुप्तचर निकायहरुले नै अमेरिकालाई सूचना दिएको बताएका छन्। पाकिस्तानले हालसम्म बिन लादेन पाकिस्तानको कुन ठाउँमा बस्थे भन्ने आफूहरुलाई आधिकारिक जानकारी…